musha > Zvese zvaunoda Kuti Uzive NezveNicotinamide Riboside Chloride
Kana iwe uchitsvaga yemuriwo Nicotinamide Riboside Chloride kuwedzera, tinokurudzira Cofttek Nicotinamide Riboside supplement. Iyo yekugadzira kambani inobata chete neNicotinamide Riboside inowedzera uye nekudaro, munhu anogona kuzorora aine chokwadi chekuti zvinowedzerwa zvakagadzirwa nekambani ndezvemhando yepamusoro kwazvo. Iyo Cofttek Nicotinamide Riboside supplement inouya mune nyore-kudya-makapuru, ayo ari nyore kumedza. Vashandisi vanofanirwa kutora kapisi imwe chete pazuva.
Nekudaro, kana iwe uchitsvaga gluten, zai, BPA, nzungu, zvinodzivirira uye chigadzirwa chisina mukaka, tinokurudzira kuisa mari yako muCofttek Nicotinamide Riboside yekuwedzera. Iyi yekuwedzera inosanganisa NR ne flavonoids. Pamwe chete, izvi zviviri zvinowedzera sirtuin chiitiko. Zvinotonyanya kukosha, Cofttek inotaura kuti inoita maround mana ekuyedza pane yega yega yekuwedzera uye nekudaro, zvinowedzerwa nekambani zvakachengeteka zvakakwana. Uyezve, izvi zvinowedzerwa zvinogadzirwa mune cGMP yakasimbiswa nzvimbo uye TGA yakasimbiswa nzvimbo
Nicotinamide Riboside Chloride Mibvunzo
Nicotinamide Riboside Chloride kana Niagen ndiyo kristaro fomu yaNikotinamide Riboside, inova NAD + precursor vhitamini. Ipo Nikotinamide Riboside inorema 255.25 g / mol, Nicotinamide Riboside Chloride inorema 290.70 g / mol uye 100 mg yaNicotinamide Riboside Chloride inopa 88 mg yeNicotinamide Riboside. NR inoonekwa yakachengeteka kushandiswa muzvikafu.
kunyange Nicotinamide Riboside chimiro cheVitamin B3, ayo akasiyana masisitimu anoita kuti ive yakatosiyana kubva kune mazhinji emamwe mitezo yebitamini B3 boka, senge nicotinamide uye niacin. Ipo Niacin ichikonzera kuti ganda rimhanye nekumisikidza iyo GPR109A G-protein yakasangana receptor, Nicotinamide Riboside haigadzirise zvachose neiyi receptor uye nekudaro, haina kana kukonzera kupururudza kweganda, kunyangwe kana ichidyiwa mumwero wakakura weiyo 2000 mg pazuva. Kupfuurirazve, kuyedzwa kwakaitwa pamakonzo kwakaratidza kuti Nicotinamide Riboside ndiyo yeNAD + inotungamira yakatungamira kumusoro kwakakwirira muNicotinamide Adenine Dinucleotide kana NAD + mukati memuviri.
Nicotinamide Riboside inoitika nechero mukudya kwemunhu uye kamwe mukati memuviri, inochinja kuita NAD +, iyo inodiwa nemuviri mabasa akasiyana siyana. Semuenzaniso, kutsvagurudza kwesainzi kwakaratidza kuti Nicotinamide Riboside Chloride kana NAD + yakapihwa naNR inovandudza mitochondrial basa pamwe nekunzwa kwe insulin nekumisa mhuri yevahertuin ma enzymes, ayo ane basa rekugadzirisa oxidative metabolism mukati memuviri.
Nei Tichida Nicotinamide Riboside Chloride
Iyo yekushambadzira indasitiri ndeye bhiriyoni-madhora indasitiri, kunyanya nekuti vanhu vanofungidzirwa nemaitiro avo. Ichi zvakare ndicho chakakosha chikonzero nei kutsvagisa kwakakomberedza anti-kuchembera zvinongedzo uye zvigadzirwa zvaita kufambira mberi kwakadaro kunoshamisa munguva pfupi yakadaro. Masangano epasirese anonzwisisa kuti pane mari inogadzirwa kubva pachishuwo chevanhu chekugara vari vadiki nekusingaperi, nekudaro, vane zvikwata munzvimbo, vachipa mazuva nemavhiki kuti vawane zvigadzirwa nezvigadzirwa zvinogona kuwedzera hutano hweganda. Nicotinamide Riboside kana Niagen yakawanikwa semhedzisiro yekutsvaga kusingazungunuke kwezvigadzirwa zvekurwisa kuchembera. Kunyange zvigadzirwa zvizhinji zvinopesana nekukwegura zvichideredza zviratidzo zvekukwegura kubva paganda, Niagen inoderedza zviratidzo zvekukwegura mukati memuviri. Nicotinamide Riboside kana Niagen ndiyo kristaro fomu yaNicotinamide Riboside Chloride uye kamwe mukati memuviri, inoshanduka ikava NAD +, iyo inoitisa kukwegura kune hutano pamwe nemamwe mabasa akasiyana akakosha.
Is Nicotinamide Riboside Chloride Yakachengeteka?
Idzo dzinoverengeka zvidzidzo zvakaitiswa parizvino zvakawana Nicotinamide Riboside yekushandisa mune yakatarwa 1000 kusvika 2000 mg pazuva yakachengeteka kuti ishandiswe nevanhu. Zvisinei, sezvo zvimwe zvidzidzo zvekongiri zvichidikanwa munzvimbo ino, vagadziri veNicotinamide Riboside vanokurudzira kuchengeta kudya kwezuva nezuva kweNR pasi pe250-300 mg pazuva.
Kunyangwe Nicotinamide Riboside kana Nicotinamide Riboside Chloride yekushandisa yakachengeteka, inogona kutungamira kumhedzisiro mhedzisiro senge kusvotwa, kutemwa nemusoro, kuzvimba, kuneta uye manyoka. Kana iwe ukasangana nechimwe chezviratidzo izvi uchitora NR yekuwedzera, kurumidza kubvunza chiremba wako. Zvakare, sezvo pasina humbowo hwakakwana maererano nemabatiro eNicotinamide Riboside pavakadzi vane pamuviri nekuyamwisa, boka iri rinofanira kubva pakushandisa kweNicotinamide Riboside zvinowedzera.
Unogona nad kudzosera kukwegura?
Asi ongororo dzichangobva kuitwa dzakaratidza kuti kuwedzera NAD + mumuviri kunogona kudzorera mashandiro emagetsi emuviri sekunge kudzosera nguva kumashure - kuchidzikisira kukwegura. Chaizvoizvo, varume vanogona kudzoreredza kukwegura nekudzorera hutano hwakanaka hweNAD +.
Kurapa kweNAD kunodhura zvakadii?
NAD + Inodhura Zvakadii? NAD + infusions inotanga pamadhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nematatu uye inogona kuverengerwa kuisa zvigadzirwa kubva kuMIVM Cocktail. Iyo Mobile IV Medics NAD + MIVM Cocktail iri $ 749 uye iyi yekurapa yakasarudzika ine akawedzera mavhitaminzi uye zvinovaka muviri senge: Magnesium.
Nad anovandudza ganda here?
Mumwe chipangamazano wemagazini yeC & T anobvuma kuti: “NAD + yakakosha mumaseru metabolism, uye iri kuwana nzira yayo muindasitiri yezvizoro senzira yekuwedzera simba remasero eganda. Pfungwa ndeyekuti, kana iwe ukawedzera simba reganda resero reganda rinokwegura, rinoshanda zvakanyanya senge ganda rechidiki uye rinoburitsa ganda riri nani.
Nmn inoita kuti utaridzike semudiki here?
Vakati, "Lab yedu yakaratidza kuti kupa NMN mbeva kwemwedzi gumi nemiviri kunoratidza kushamisa kukwegura." Sekureva kwaImai, kuturikira zvawanikwa kuvanhu zvinoratidza kuti NMN inogona kupa munhu metabolism yemakore gumi kusvika makumi maviri mudiki.
Iko nad vhitamini B3?
Chii chinonzi Nicotinamide Riboside? Nicotinamide riboside, kana niagen, ndeimwe nzira yevhitamini B3, inonziwo niacin. Sedzimwe mhando dzevhitamini B3, nicotinamide riboside inoshandurwa nemuviri wako kuita nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +), coenzyme kana mubatsiri wemorekuru.
Nicotinamide yakafanana neVhitamin B3 here?
Niacin (inozivikanwawo sevhitamini B3) ndeimwe yemavhitamini emvura anonzi B. Niacin izita rakajairika reicicinic acid (pyridine-3-carboxylic acid), nicotinamide (niacinamide kana pyridine-3-carboxamide), uye nezvimwe zvinoenderana, zvakaita senicotinamide riboside.
Ndinogona kushandisa niacinamide mazuva ese?
Sezvo ichinyatso kubvumirwa nevanhu vazhinji, niacinamide inogona kushandiswa kaviri pazuva zuva nezuva. Inoshanda chero nguva yegore kunyangwe ichiuya zvakanyanya kubatsira munguva yechando munguva yechando, yakaoma mamiriro ekunze uye kazhinji kushandisa kupisa kwepakati. Iishandise mukumhanya usati watanga yako retinol kurapwa uye padivi payo, futi.
Niacinamide inokonzera kumeso kwebvudzi kukura?
Niacinamide ine basa rakakosha mukukura bvudzi refu uye rakasimba nekuda kwekutenderera kwaro kuwedzera zvivakwa. Inowedzera kutaridzika uye kunzwa kwebvudzi, nekuwedzera muviri, kurerutsa, sheen. Iyo zvakare inovandudza maratidziro ebvudzi iro rakakuvara panyama / chemakemikari nekubatsira kuvaka Keratin.
Ndeipi iri nani niacinamide kana vhitamini C?
Uyezve, "kazhinji kutaura, vhitamini C inoda kushandiswa pane yakaderera pH kuti igone kushanda, nepo niacinamide inoshanda zvirinani kune yepamusoro / kwazvakarerekera pH," anowedzera Romanowski. (Yayo fussy hunhu ndosaka akawanda mavitamin C zvigadzirwa skew padivi remutengesi, chinhu chakaomarara chinogadzira nacho.)
Niacin yakaipa kune chiropa chako here?
Niacin inogona kukonzera nyoro-ku-zvine mwero serum aminotransferase kukwidziridzwa uye madosi epamusoro uye mamwe maitiro enikiin akabatanidzwa kuchipatara zvinoonekwa, zvakanyanya kukuvara kwechiropa izvo zvinogona kuve zvakakomba pamwe nekuuraya.
Nicotinamide yakanaka kune ganda here?
Niacinamide inoderedza kuzvimba, izvo zvinogona kubatsira kudzikisira kutsvuka kubva eczema, acne, uye zvimwe zvinopisa ganda mamiriro. Inoderedza kutaridzika kwepore. Kuchengeta ganda rakatsetseka uye rakanyoroveswa rinogona kunge riine bhenefiti yechipiri - kudzikiswa kwepanyama saizi yepore nekufamba kwenguva.
Ko 10% niacinamide yakawandisa here?
Niacinamide inogona kuvandudza kutaridzika kweganda rako nekurapa kukuvara kwezuva, kudzivirira kubuda, uye kugadzirisa mitsara yakanaka uye makwinya. Iko kusunganidzwa kwemusoro wenyuchi niinaminamide zvigadzirwa zvinokwira kusvika ku10%, asi zvidzidzo zvakaratidza mhedzisiro ine yakaderera se2%.
Nicotinamide inoshanda nekukurumidza sei?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti niacinamide ishande? Iwe unozoona mamwe mhedzisiro nekukurumidza kunyangwe akawanda ezvidzidzo pa niacinamide yakaratidza mhedzisiro mushure memasvondo masere kusvika gumi nemasere. Tarisa zvigadzirwa zvine 8% niacinamide. Ndiyo muzana yakaratidza kuti inoita musiyano pasina kukonzera kutsamwa.
Niacinamide inobvisa acne mavanga here?
Niacinamide inogona kudzikamisa zvinoitwa nemelanosome mukati memasero, izvo zvinogona kuvandudza zvakasarudzika hyperpigmentation kubva kumacne mavanga pamwe nevaya vanorwara nemelasma.
Chii chinonzi vitamini B5 paganda rako?
Pro-Vitamin B5 inobatsira kuchengetedza ganda rakapfava, rakatsetseka uye riine hutano. Iyo zvakare ine anti-yekuzvimba mhedzisiro iyo inogona kubatsira kukurudzira yako ganda kuporesa maitiro. Yakadzika hydrating, inobatsira kuchengetedza ganda kudzimwa nekutora mwando kubva mumhepo (wakangwara!).
Ndingaite sei kuti ndiwedzere NAD yangu zvakasikwa?
Kugumira kubuda kwezuva
Kutsanya uye ketosis kudya
Unogona here kutora NAD nemuromo?
Nekuda kweizvozvo, zvemumuromo zveNAD zvinowedzera hazvibudiriri pane IV infusions nekuda kweiyo yakaderera yekumwa mwero. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti zvemumuromo zvinowedzera zvakachengeteka kwazvo; hausi panjodzi yekuva nehutachiona sezvaungaite nemushonga we IV.
Inotora nguva yakareba sei kushanda?
Zvirongwa zvekudya zvinogona kusanganisira vitamini-zvakapfuma zvekusimudzira dopamine uye inogona kuburitsa NAD muuropi. Vazhinji varwere vanoda mazuva matanhatu kusvika kugumi ekupfekerwa kuti vanzwe mhedzisiro.
Elysium yakachengeteka here?
Inokurudzirwa kuti ishandiswe kwenguva yakareba, zvichiratidza kuti chiitiko chekusimudzira cheNAD chinogona kungochengetwa kana vatengi vakaramba vachishandisa chigadzirwa ichi. Elysium Hutano Hwaro. Sekuwedzera, Basis inoonekwa yakachengeteka kuti ishandiswe nevanhu.
Chii chinonzi NAD anti kuchembera?
Nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +) chinhu chakakosha cofactor mumasero mhenyu ese anobatanidzwa muzvinhu zvakakosha zvehupenyu. … Humbowo hunoratidza kuti kukwirisa kweNAD + kunogona kudzora kana kudzosera kumashure mamiriro ekukwegura uye zvakare kunonotsa kufambira mberi kwezvirwere zvine chekuita nezera.
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yenicotinamide riboside?
Muzvidzidzo zvevanhu, kutora chiuru che1,000-2,000 mami pazuva hakuna kukuvara.
Vamwe vanhu vakataura zvinyoro kusvika kune zvine mwero mhedzisiro, senge kusvotwa, kuneta, kutemwa nemusoro, manyoka, kusagadzikana kwemudumbu uye kugaya.
Ndeupi musiyano uripo pakati penicotinamide riboside uye nicotinamide mononucleotide? (2)
Musiyano mukuru, uye uri pachena, musiyano pakati peNMN neNR ukuru. NMN ingori yakakura kupfuura NR, zvichireva kuti kazhinji inoda kuputswa kuti ikwane muchitokisi. NR, kana ichienzaniswa nedzimwe dzinotungamira NAD + (senge nicotinic acid kana nicotinamide) inotonga zvakanyanya mukugona.
Nicotinamide yakafanana neNmn here?
Nicotinamide riboside neNMN zvakafanana nemakemikari kunze kweboka rimwechete re phosphate riripo paNMN. Chidzidzo ichi chinoratidza kuti iri rinowedzera phosphate boka rinoda kuti NMN yekuwedzera itange kushandurwa kuita nicotinamide riboside isati yapinda muchitokisi.
Nad anobatsira nehope here?
NAD + nhanho dzine hukama hwakasimba neiyo yekurara-wake kutenderera uye nezvirwere zvine chekuita nezera. Hapana humbowo hwakananga hwakaratidza kuti NAD + inoshanda senzvimbo iri pakati pekurara-kumuka kutenderera nezvirwere zvine chekuita nezera.
Chii chinoitwa naTru Niagen kumuviri?
Chii chinonzi Tru Niagen? Tru Niagen, naChromaDex, chigadzirwa chine simba chine hutano chingakubatsire kushora kukwegura nekusimbisa kukura kwemaseru nekugadzirisa. Inoita izvi nekusimudza yako NAD mazinga. Kutsvagurudza kunoratidza kuti NAD inobatsira muviri wako kushandura zvinovaka muviri uye chikafu kuita simba, kuwedzera metabolism.
Ndeipi iri nani Nmn kana NAD?
NMN ingori yakakura kupfuura NR, zvichireva kuti kazhinji inoda kuputswa kuti ikwane muchitokisi. NR, kana ichienzaniswa nedzimwe dzinotungamira NAD + (senge nicotinic acid kana nicotinamide) inotonga zvakanyanya mukugona. Asi ipa NMN musuwo mutsva, iwo waunokwanisa kukwana mukati, uye mutambo mutsva chose.
Ko nad zvinowedzera zvinoshanda here?
Zvidzidzo zvinoratidza kuti kuwedzera maNAD + nhanho dzinogona kuwedzera hupenyu hwehupenyu mune mbiriso, honye nemakonzo. Kutsvaga kwemhuka kunoratidza zvakare kuvimbisa kweNAD + kwekuvandudza zvinoverengeka zvehutano. Kukwidza mwero wemorekuru mumbeva dzekare kunoita sekumutsiridza mitochondria-mafekitori esimba esimba, ayo anopera nekufamba kwenguva.
Chii chiri muNad IV kurapa?
Imwe yemishonga mitsva kwazvo mumunda wekupindwa muropa neamino acid kurapa, inozivikanwa seNAD IV kurapa. Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD) is metabolic co-enzyme uye inobhadhariswa nebasa rakakosha rekugadzirisa, kugadzirisa, uye kugadzirisa rese sero mumuviri.
Ndeapi maNAD anosimudzira?
NAD zvinowedzera ndezvekuwedzera izvo zvine nicotinamide riboside, chimiro chevhitamini B3. Kana ikatorwa sechiwedzera, muviri unoshandura nicotinamide riboside kuita nicotinamide adenine dinucleotide (NAD +). NAD + coenzyme inobatanidzwa mune dzakawanda maseru maseru. Sezvo isu patinokwegura, iyo NAD + nhanho mumuviri wedu inoderera.
Ndeupi mutsauko pakati peNADH neNAD +?
Kuti iite basa rayo semutakuri wemagetsi, NAD inodzokera kumashure nekudzoka pakati pemhando mbiri, NAD + neNADH. NAD + inogamuchira maerekitironi kubva kumamorekuru ezvekudya, achichinja kuita NADH. NADH inopa maerekitironi kuoksijeni, ichidzosera kuNAD +.
Ndeipi iri nani NAD kana NMN?
NMN ingori yakakura kupfuura NR, zvichireva kuti kazhinji inoda kuputswa kuti ikwane muchitokisi. NR, kana ichienzaniswa nedzimwe dzinotungamira NAD + (senge nicotinic acid kana nicotinamide) inotonga zvakanyanya mukugona. … NR, zvisinei, yakaratidzirwa kuisa masero muchiropa, mhasuru, uye hura hwehunhu hwemhando dzemakonzo.
Ndezvipi zvekudya zvine nicotinamide riboside?
Deredza Kunwa Doro Zvinwiwa
Ndezvipi zvekudya zvakakwirira municotinamide?
Kune maviri mafomu evitamini B3. Imwe fomu ndeye niacin, imwe yacho niacinamide. Niacinamide inowanikwa muzvikafu zvakawanda zvinosanganisira mbiriso, nyama, hove, mukaka, mazai, miriwo yakasvibirira, bhinzi, uye tsanga dzezviyo. Niacinamide inowanikwawo muvhitamini B yakawanda inowedzera zvinowedzerana nemamwe mavitamini B.
Niacin yakaipa pachiropa here?
Chii chinoitwa nicotinamide kune ganda?
Nicotinamide inoshandiswa semushonga inogona kubatsira ganda munzira dzakasiyana siyana. Nicotinamide ine anti-anogumbura ehupfumi, ayo anogona kushandiswa pakurapa nzombe (blistering) hosha. Iyo inogona kuvandudza acne neayo anti-kuzvimba chiito uye nekudzora sebum.
Niacin yakanaka kune kushushikana here?
Zvinoenderana nezvipupuriro zvepamhepo, vanhu vane kushushikana kwakanyanya vanopindura kurapa niacin vanowanzo batsirwa nedosi yakakwira kwazvo, kubva chero pakati pe1,000 kusvika 3,000 mg. Zvinoenderana nezvakanyorwa muna2008 zvekudya zvinovaka muviri, Chikafu Nyaya, mumwe mukadzi akaona kushushikana kwake kuchinjika nemutengo wezuva nezuva we11,500 mg.
Ndezvipi zviratidzo zvekushomeka kwevhitamini B3?
Vitamin B3 kushomeka kwezviratidzo zvinosanganisira kuneta, kuzvimba, kusvotwa, kurutsa, manyoka, maronda emumuromo, kuzvimba kupenya kwakatsvuka rimi, kutenderera kwakashata, uye kushushikana kwemoyo. Ganda rakatsemuka rine ganda rinotarisisa kune zuva chimwe chiratidzo chekushomeka kwevhitamini B3.
Ko kurovedza muviri kunowedzera NAD here?
Kune ese ari maviri, NAD inodikanwa kudzikisirwa kuNADH mune tricarboxylic acid kutenderera, kuwedzera kugadzirwa kweATP kuburikidza neketani yekutakura yeelectron. Chokwadi, iwo ese mazinga eNAD uye kuratidzwa kweiyo NAD salvage enzyme mumhasuru yakaratidzwa kuwedzera panguva yekurovedza muviri.
Nicotinamide vhitamini B3 here?
Nicotinamide, inozivikanwawo se niacinamide, is-soluble amide fomu yeNiacin kana vhitamini B3. Inowanikwa mune zvekudya zvakaita sehove, huku, mazai, uye zviyo zvezviyo. Inotengeswawo sedhayeti yekudya, uye senge isiri-yekutsvaira fomu niacin.
Niacin inowedzera NAD + nhanho here?
taura kuti niacin, vhitamini B3, inogona kunyatso kununura maNAD + mazinga musumbu neropa revarwere vane mitochondrial myopathy, kugadzirisa zviratidzo zvechirwere uye simba remhasuru. NAD + mazinga akawedzera zvakare mune zvine hutano zvidzidzo. Humbowo hunoratidza kuti niacin inoshanda yeNAD + booster muvanhu.
Iwe unotora sei NAD +?
Nezve kuwedzera kweNAD +, tora NADH 5 mg mahwendefa madiki. Kuchengetedza jet lag, tora NADH 20 mg. Kuti usvike zvakakwana NAD + nhanho uwane IV ß-Nicotinamide adenine dinucleotide infusion vhiki nevhiki kana pamwedzi.
Ndeapi masosi maviri?
"Zvivi" izvi zvinopa mamiriro manomwe anouraya anowedzera kuwanda nekukwegura (kufutisa, chirwere 2diabetes, chirwere chemoyo, gomarara, kuora mwoyo, arthritis, uye osteoporosis). Iwo masurtuin kirasi yeNAD + -anozvimiririra deacetylases anosanganisira nhengo nomwe muvanhu uye nedzimwe mhuka.
Ndingaite sei kuti ndiwedzere sirtuins yangu?
Pakati penzira dzekudzivirira kana kurwisa chirwere chakadai kurovedza muviri. Kurovedza muviri kunokanganisa zvinoitika uye / kana kuratidzwa kwesirtuins, zvichikonzera zvirinani oxidative metabolism kushanda, kuwedzera biogenesis uye mitochondrial basa, pamwe nekuchengetedza iyo antioxidant system.
Ndinofanira kutora rinhi Niagen?
Macapsule anogona kutengwa mune chero 1-mwedzi, 3-mwedzi, kana matanhatu-mwedzi kuwedzera. Iyo kambani inokurudzira vatengi kutora maviri eiyo 6 mg makapisizi pazuva kana kana pasina chikafu. Macapsule anogona kutorwa chero mangwanani kana husiku uye pamwe kana pasina chikafu.
Zvinotora nguva yakareba sei kuti TRU Niagen ishande?
Zvidzidzo zvekiriniki zvakabhadharwa neChromaDex zvinoratidza kuti NR inowedzera zvakachengeteka uye zvine mutsindo kuwedzera vanhu 'NAD muropa mushure memasvondo matanhatu kusvika matanhatu. Tru Niagen anonyatsotaura kuti vanhu vanotora 6 mg pazuva rekuwedzera kwemavhiki masere vakawedzera NAD ne8-300%.
Ndeipi nguva yezuva yandinofanira kutora Tru Niagen?
Tru Niagen inokurudzirwa kutorwa panguva imwechete mazuva ese. Unogona kuitora kamwe zuva nezuva mangwanani kana husiku, uine kana usina chikafu.
Ndezvipi zvinoshandiswa muTru Niagen?
TRU NIAGEN ine nicotinamide riboside iyo isina kufanana nevhithamini B3 manyuko anowanikwa mune zvigadzirwa zvemultivitamin. TRU NIAGEN inodhonzwa nemaseru uye inoshandurwa nenzira kwayo kuNAD ichishandisa nzira yakasarudzika yakasiyana ne vhitamini B3 (niacin, nicotinamide) inowanikwa mumavhitamini anowedzera.
Ndeipi mhedzisiro mhedzisiro yeNiacinamide?
Kusiyana niacin, niacinamide haikonzere kufambisa. Nekudaro, niacinamide inogona kukonzera madiki madiki mhedzisiro senge mudumbu kugumbuka, ura hwemukati, dzungu, kuputika, kuchenesa, uye mamwe matambudziko. Kana yaiswa paganda, niacinamide kirimu inogona kukonzera kupisa kwakapfava, kuchenesa, kana kutsvuka.
Chii chausingakwanise kusanganisa ne niacinamide?
Usasanganise: Niacinamide uye vhitamini C. Kunyangwe zvese zviri zviviri antioxidants, vhitamini C chimwe chinhu chisingaenderane neacinamide. "Ose ari maviri anowanzoitwa antioxidants anoshandiswa mune dzakasiyana zvigadzirwa zveganda, asi haafanire kushandiswa imwe mushure meimwe," anodaro Dr. Marchbein.
Iwe unogona here kushandisa yakawandisa niacinamide pachiso?
Kana ikashandiswa mumatunhu akakwirira, niacinamide inogona kukonzera kutsamwa kweganda uye kutsvuka. Kana iwe ukaitika uri mune vasina rombo rakanaka vane zvakashata kuita kune chigadzirwa chine niacinamide, pane zvitatu zvakakosha zvingangoitika: uri weergisi, pane chimwe chinhu chinokonzeresa kutsamwa, kana iwe uri kushandisa zvakawandisa.
Ko 1000 mg yeNiacinamide yakachengeteka here?
Kuti kuderedze njodzi yemhedzisiro iyi, vanhu vakuru vanofanirwa kudzivirira kutora niacinamide mumadhosi anopfuura 35 mg pazuva. Kana madosi eanopfuura matatu magiramu pazuva reNiacinamide anotorwa, zvimwe zvakakomba mhedzisiro zvinogona kuitika. Izvi zvinosanganisira matambudziko echiropa kana shuga yakakwira muropa.
Zvidzidzo zvishanu zvakaitwa kusvika parizvino zvakasimbisa kuti Nicotinamide Riboside yakachengeteka kuti ishandiswe nevanhu. Nekudaro, izvi zvidzidzo zvakagadza yakachengeteka Nicotinamide Riboside Chloridedosage muganho wevanhu vari pakati pe1,000 kusvika 2,000 mg pazuva. Zvisinei, zvinofanirwa kuchengetwa mundangariro kuti zvese zvidzidzo zvakaongorora kuchengetedzwa kweNicotinamide Riboside yaive nehukuru hwesampula uye nekudaro, kumwe kutsvagurudza kunodiwa munzvimbo ino.
Chinangwa chekutanga cheNicotinamide Riboside Chloride ndechekupa Nicotinamide Riboside Chloride kana Niagen kumuviri. Niagen kana NR inowanzo kuwanikwa mumhando mbiri: mapiritsi uye macapsule. Mazhinji Nicotinamide Riboside anowedzera vagadziri vanobatanidza NR nemamwe makemikari, akadai sePterostilbene. Chero zvazvingaitika, kuti uve wakachengeteka, vazhinji vanogadzira vagadziri vanokurudzira kuchengetedza kudya kwezuva nezuva kweNR pakati pe250 kusvika 300 mg pazuva.
Nicotinamide Riboside Chloride Makomborero
① Nicotinamide Riboside Chloride Inosimudzira Hutano Kukwegura
Iyo NAD + yakagadziriswa naNicotinamide Riboside Chloride mukati memuviri inoshanda chaiyo ma enzymes anobatana nehutano hwekukwegura. Imwe enzyme yakadaro ishertuins, iyo yakabatana nehupenyu hwese hwakagadziridzwa uye hupenyu hwehupenyu mumhuka. Zvidzidzo zveSainzi zvakaratidza kuti masisittu anovandudza hupenyu hwehupenyu uye hupenyu hurefu nekudzikisira kuzvimba, kuwedzeredza mabhenefiti ane hukama ne calorie kurambidzwa uye kugadzirisa iyo yakakanganisika DNA. Iyo NAD + yakagadziriswa naNicotinamide Riboside Chloride zvakare inosimudzira Poly polymerases inozivikanwa kugadzirisa yakakanganisika DNA. Kupfuurirazve, zvidzidzo zvinoverengeka zvesainzi zvakabatanidza basa rema polymerases nehupenyu hwakawedzerwa hupenyu.
② Iyo Inoderedza Imwe YeMukana Wekukudziridza Hosha Yemwoyo
Kukwegura kunowedzerawo mikana yemunhu yekuva nezvirwere zvemwoyo. Sezvo vanhu vanofambira mberi muzera, mitsipa yavo yeropa inova inorema uye kuomarara, zvinova zvinotungamira mukuwedzera kweropa Kana iro reropa mukati memidziyo richiwedzera, moyo unofanirwa kushanda zvakapetwa zvakanyanya kupomba ropa, izvo zvinotungamira kuzvirwere zvakasiyana zvemwoyo. Iyo NAD + yakapihwa naNicotinamide Riboside Chloride inodzosera shanduko dzine chekuita nezera dzakakonzerwa nemitsipa yeropa. Pane humbowo hwakawanda hwesainzi kuratidza kuti Nicotinamide Adenine Dinucleotide kana NAD + haingoderedze kuomarara kwemidziyo yeropa chete asi zvakare inogadzirisa systolic BP.
③ Nicotinamide Riboside Chloride Inopawo Dziviriro kuBongo Masero
Nicotinamide Riboside inodzivirira maseru ehuropi. Chidzidzo chakaitwa pamakonzo chakaratidza kuti NR-inosimudzira kugadzirwa kweNAD + yakawedzera kugadzirwa kwePGC-1 alpha protein kusvika pa50%. Iyo PGC-1 alpha protein inobatsira kuchengetedza maseru ehuropi kurwisa oxidative kusagadzikana uye zvakare inovandudza mitochondrial basa. Izvozvi, nekudaro, kuti NR kushandiswa muvanhu kunodzivirira kubva kuzvirwere zvehuropi zvakakonzerwa nezera, senge Alzheimer's naParkinson's. Imwe yedzidzo yekutsvagurudza yakadzidza mhedzisiro yeNAD + nhanho pane vanhu vanotambura naParkinson's. Chidzidzo chacho chakagumisa kuti NAD + yakagadzirisa basa re mitochondrial mumasero emasero.
④ Zvimwe Zvikonzero Zvakakosha zveNicotinamide Riboside Chloride
Zvimwe kunze kwekubatsira kwakakurukurwa pamusoro apa, heano mamwe mashoma ekuwedzera mabhenefiti akabatana neNicotinamide Riboside Chloride.
NR inozivikanwa kukwidziridza simba remhasuru, kushanda uye kutsungirira uye saka, NR yekushandisa inosanganisirwa neiri nani mutambo wemitambo.
Sezvakakurukurwa pamusoro, NR-inosimudzira kugadzirwa kweNAD + inogadzirisa yakakuvara DNA uye inopa chengetedzo kubva kune oxidative kusagadzikana. Izvi, zvakare, zvinoderedza mikana yemunhu yekuva nekenza.
Chidzidzo chakaongorora mhedzisiro yaNicotinamide Riboside pane metabolism mumakonzo. Chidzidzo chacho chakagumisa kuti NR yakawedzera metabolism mumakonzo. Kunyangwe kuchinyanya kuwanikwa hunyanzvi chesainzi maererano neizvi, masayendisiti mazhinji anotenda kuti Nicotinamide Riboside ichave nemhedzisiro yakafanana pane vanhu uye nekudaro, inofanira kubatsira nekudzikisira uremu.
Ndekupi Kwokutenga Nicotinamide Riboside Chloride Powder mu Bulk?
Kudiwa kweNicotinamide Riboside supplements kwakawedzera zvakanyanya mumakore mashoma apfuura, kunyanya nekuda kwekuti Nikotinamide Riboside ine zvakawanda zvakanaka. Kana iwe uri kutsvaga kuzotungamira mumusika weNicotinamide Riboside supplements musika, chinhu chekutanga chaunofanira kuita kuzviwana iwe wakavimbika uye akavimbika zvigadzirwa zvekutengesa zvinhu. Kupi tenga Nicotinamide Riboside Chloride powder muhuwandu? Mhinduro ndeye Cofttek.
Cofttek mutengesi wezvinhu zvakagadzirwa zvakavepo muna2008 uye mumakore angangoita gumi chete, kambani yakasimbisa kuvepo kwayo munyika dzinoverengeka. Kunze kwekugadzira zvigadzirwa zvakavimbika, kambani yakananganawo nekufambira mberi mumunda webiotechnology, kemikari tekinoroji uye kuyedza kwemakemikari. Iyo kambani inozvipirawo kutsvagisa kwemhando yepamusoro, iyo inoipa iyo pamucheto pane vamwe vatengesi mumusika. Iyo Nicotinamide Riboside Chloride powder yakapihwa nekambani inouya mumabatch e25 kgs uye inogona kuvimbwa nehunhu. Zvakare, iyo kambani ine yakanakisa yekutengesa uye yevatengi rutsigiro timu iyo inotarisira zvese zvaunoda uye kubvunza mune chaiyo-nguva. Izvi, kana iwe uchida kutenga Nicotinamide Riboside Chloride powder muhuwandu, ndapota bata Cofttek.
(1).Conze, D., Brenner, C. & Kruger, CL Kuchengetedza uye Metabolism yeNguva refu Yekutonga kweNIAGEN (Nicotinamide Riboside Chloride) mune Randomized, Double-Blind, Placebo-inodzorwa Clinical Trial yeHutano Hwakawanda hweVakuru Vakuru. Sci Rep9, 9772 (2019)
(2).Carlijn ME Remie, Kay HM Roumans, Michiel PB Moonen, Niels J Connell, Bas Haskes, Julian Mevenkamp, ​​Lucas Lindeboom, Vera HW de Wit, Tineke van de Weijer, Suzanne ABM Aarts, Esther Lutgens, Bauke V Schomaker, Hyung L Elfrink, Rubén Zapata-Pérez, Riekelt H Houtkooper, Johan Auwerx, Joris Hoeks, Vera B Schrauwen-Hinderling, Esiteri Phielix, Patrick Schrauwen, Nicotinamide riboside supplementation alters body composition and skeletal misuli acetylcarnitine concentrations mune vane hutano hwakanaka vanhu. The American Journal of Clinical Nutrition, Vhoriyamu 112, Chinyorwa 2, Nyamavhuvhu 2020, Mapeji 413–426
(3) .Elhassan, YS, Kluckova, K., Fletcher, RS, Schmidt, MS, Garten, A., Doig, CL, Cartwright, DM, Oakey, L., Burley, CV, Jenkinson, N., Wilson, M., Lucas, S., Akerman, I., Seabright, A., Lai, YC, Tennant, DA, Nightingale, P., Wallis, GA, Manolopoulos, KN, Brenner, C.,… Lavery, GG (2019) ). Nicotinamide Riboside Inowedzera iyo Yakakwegura Yevanhu Skeletal Muscle NAD + Metabolome uye Inokonzeresa Transcriptomic uye Anti-kupisa Zviratidzo. Cell inoshuma, 28(7), 1717-1728.e6.
(4).Nicotinamide riboside chloride upfu
Ndiri kungodzidza nezvezvinodhaka zvazvino kunonoka kuchembera, zvinhu zvandakadzidza kusvika pari zvino 1. Nicotinamide riboside - yezvikamu zveNAD 2. MitoQ, C60oo, PQQ - Mitochondrial antioxidants 3. Quercetin - Senolitics 4. Carnosine - AGE breaker Haisi chokwadi kana ichinonoka kuchembera zvachose, asi vanhu vari kuyedza izvi.
Nezve ganda rangu, NR yekuwedzera yaita kuti zvinyanye kushomeka kuti zviome, kunyanya tsoka dzangu munguva yechando.
Panguva iyo painosvika kwauri yadzikira kusvika zero ndosaka tichitora vatangiri vakaita seNR neNMN uye vese vari vaviri zviri pamutemo NAD + zvinowedzera.
Chero chaunofunga kuenda, usatange pa1g. Tanga pane imwe yepasi dose uye ona kuti unofamba sei.
Nicotinamide Riboside pachayo haina kunyatsogadzikana.
Panguva iyo painosvika kwauri ingangove yakanyanya kudzikisirwa muNAM.
Nekudaro Zvinenge zvese zvinhu zvaunogona kutenga ndiNR Chloride, ino gadzikana chero bedzi isinganyorove (kunyangwe zvakataurwa naSinclair, izvi zvinogona kuratidzwa ne data). Iyo Chloride chikamu cheNR Chloride chingori chinodzikamisa uye nekukurumidza apo NR Chloride yarova mvura (senge dumbu rako) chikamu cheChloride chinotsemuka uye iyo NR inosunungurwa.
NR inotungamira yeNMN, NMN inotungamira yeNAD +.
Iyi yese nr nampt nmn nad sirt1 crap iri mhando yekuvhiringidza kwandiri asi kubva pane zvandingaunganidze, nr inoshandurwa nampt mumafuta maseru uye beta islet maseru kuita nmn, iyo inoshandurwa neimwe enzyme kuita nad +, uye nad + inopindirana ne sirt1 kukonzera kukanda kwe insulin.
Insulin chinhu chekukura uye zvakare inounza shuga mumasero, zvichikonzera kuwedzera kwesimba.
Niagen iri NR-CL, iyo yakagadzikana, ine rakareba rakareba-hupenyu, uye haidi kuve firiji. Handifunge kuti chero munhu anotengesa yakachena NR.
Kuwedzera kwe10-vhiki yekuwedzera kweNR kwakanyatsoshivirirwa uye zvakanyanya kuwedzera NAD (+) uye zvine chekuita nemetabolites muropa revakuru vakuru vane MCI. NR yakavandudza fMRI uye basa repanyama, edu ekutanga uye echipiri mhedzisiro matanho, zvichiteerana. Nekudaro, mutsauko mukuziva hauna kuzadzikiswa muchidzidzo chidiki ichi chekutyaira. Mhedzisiro yedu inopa humbowo hunotsigira hwekuenderera mberi nekuedzwa kweNR senzira yekuchengetedza chimiro chehuropi uye kushanda kune vakuru vakuru vane MCI.?
Ndakaverenga tһiѕ post c - mpletely nezve kufanana kwetsva uye preсeding technoloɡies, ino inoshamisa chinyorwa.
Ndine makore makumi maviri nematanhatu uye mushure mekutanga NR / NAD + pandakanga ndiri 26, ini zvino ndine simba randakaita pandakanga ndiri 25 uye ndinonzwa zera irowo zvakare, maekisesaizi angu ekurapa anopora nekukurumidza zvakanyanya futi.
Izvo chaizvo zvinoita chimwe chinhu uye kutsungirira kwangu kuri kumusoro saka kunofanirwa kunge kuri kushanda.